5 Akajairika Girazi Edge Mhando
Zvishongo zvegirazi zvinogona kugamuchira akawanda akasiyana magirazi ekumusoro ekurapa, imwe neimwe inokanganisa kushanda nekuita kwechikamu chakapedzwa. Kugadziridza kunogona kuvandudza chengetedzo, aesthetics, mashandiro, uye hutsanana nepo ichivandudza dimensiona ...
ZXM nyowani nyowani yegirazi mbiri edger yakavhurwa muLunjiao, Foshan City.
Kugamuchirwa kushanyira uye sarudza ZXM michina. 15th Kubvumbi, 2020 Magirazi eduru egirazi kubva kuZXM akaiswa mumudziyo kuenda kuAfrica nyika. ...
Iyo Yakadzika-e Girazi Rinoshanda
Girazi ndechimwe chezvinhu zvinozivikanwa uye zvakaomarara zvekuvakisa zvinoshandiswa nhasi, nekuda kwechimwe chikamu kune ayo anogara achivandudza kwezuva uye kupisa kwemahara. Imwe nzira iyo kuita uku kunoitwa kuri kuburikidza nekushandisa kwekungoita uye kwezuva kudzora yakaderera-e kupfeka. Saka, chii chakadzika-e gla ...
Nei Uchidudzira Ndeupi Rudzi rweGirazi?
Kusarudza girazi rekuvaka chairo kwakakosha kuchirongwa chakabudirira. Kuti uwane mamwe maratidziro akajeka mukuyera, kusarudzwa uye kudomwa kwegirazi rekuvaka, Vitro Architectural Glass (yaimbova PPG girazi) inokurudzira kuti uzive izvo zvivakwa ...
How kusarudza zvakanaka girazi ngaatarire mutsetse beveling muchina?
Girazi yakatwasuka mutsara weveveling muchina ndeimwe yekutanga uye yakakura huwandu hwemishini yekugadzira inogadzirwa mugirazi yakadzika yekugadzirisa michina. 1. Iyo mota yegirazi yakatwasuka mutsara beveling muchina ndiyo inonyanya kukosha, uye kunyatso kwayo zvinodiwa zvakare v ...
Chii Chinonzi Girazi Edge Kukwiza Mushini Uye Maitiro Ekutenga Iyo Yakakodzera?
Zvigadzirwa zvegirazi zviri kudiwa zvakanyanya. Zvimwe zvinhu zvinopa mashandiro, nepo zvimwe zviri chikamu chekukwezva. Vanhu vanoda zvidimbu zvegirazi nekuda kwekujeka kwavo, aesthetics, uye runako. Kuzadzisa zvido zvevashandisi vekupedzisira, vatengesi vazhinji vegirazi vanopa akasiyana zvinhu. Ho ...